True Love As I Have Learnt – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on2May 2010 21 September 2011 Categories Love & Marriage, Reproduction, Thoughts
23 thoughts on “True Love As I Have Learnt”
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် – ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်းအရာအတွက် ဆန်းစစ်မှုတွေ လုပ်နေချိန်မှာ ဓါတ်ချောစာ(ဆရာ့စကားငှားပြောတာပါ) သတိပေးခေါင်းလောင်းသံလေးက မြည်လာပါတယ် .. ဓါတ်ချောစာ အသစ်ရောက်နေကြောင်းပါ။
ဒါကြောင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ဆရာ – စားသုံးကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်
Thank you for sharing your thoughts about “true love”.
ဘကြီးရေ …ခုမှပဲ အချစ်(အစစ်)အကြောင်းကို သေချာသိတော့တယ်း)
It is really NICE …. It reveals which one is true love or not !!! I love it !!!
Isis Ichiban says:
21 September 2011 at 10:55 am
ဆရာ နီးစပ်မှုက အချစ်စစ်ရဲ့ အမြုတေဆိုရင် တယောက်နဲ့ တယောက် ဝေးကွာသွားခဲ့ရင် အမြုတေ မတည်နိုင်တော့ဘူးလားဆရာ…. ဒါဆို အချစ်ပေါ့သွားမှာလားဆရာ။ နောက်ဆုံး အချစ် ပျက်သွားမှာလားဆရာ။
21 September 2011 at 11:14 am
သိပ်ချစ်တဲ့သူတွေ သေသွားတဲ့အခါ ကျန်ရစ်သူတွေ ဘယ်လို နေလဲဆိုတာနဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်ပါလေ။ သေခါစ တစ်ပတ်၊ အဲဒီ့နောက် တစ်လ၊ အဲဒီ့နောက် တစ်နှစ်၊ အဲဒီ့နောက် သုံးနှစ်၊ အဲဒီ့နောက် ဆယ်နှစ်… စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါဆို အဲဒီ့မေးခွန်းအတွက် အဖြေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
Michael Wily says:
I accept this absolutely…..
21 September 2011 at 1:07 pm
ဒါပေမယ့် အချစ်ခံလူ၊ ဒါမှမဟုတ် သတ္တဝါဆီက တုံ့ပြန်ဂရုစိုက်မှုကို ပြန်မရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ချဉ်တွေ ပေါက်လာပြီး “သင်းတော့လား၊ နေနှင့်ဦးပေါ့။ ငါမရှိမှ ငါ့တန်ဖိုးကို သိမယ်။ ငါက စေတနာ ထားရသလောက်၊ ချစ်ရသလောက် သင်းကဖြင့် ငါ့တစ်ဝက်လောက်တောင် ငါ့အပေါ် သိတတ်မှု မရှိဘူး”စသဖြင့် ဘာဘာညာညာတွေ တွေးမိ၊ ရွတ်မိ ကုန်တဲ့အချစ်မျိုးက “ချစ်တယ်”လို့ ကြွေးကြော်ရင်းနဲ့ “အချစ်ခံချင်တယ်”ဆိုတဲ့ အတိတ်စိမ်းကို ပေးနေတဲ့ “အချစ်ယောင်”ပါ။ << ဒီစကားကို ယောက်ျားက အမြဲပြောပါတယ် …. အချစ်ယောင်ကြီးပေါ့ 😀
တူ့ခညာ တနားပါဒယ်နော်… အချစ်ခံချင်နေရှာတာ… တူ့ကို အစွမ်းကုန် ချစ်လိုက်စမ်းပါ၊ ဂရုစိုက်လိုက်စမ်းပါ၊ ယုယလိုက်စမ်းပါ မမရယ်… ကုသိုလ်ရပါတယ်နော့… 😉
21 September 2011 at 4:23 pm
အရင်ကဖတ်ဖူးပြီးသားစာတောင် ခုလိုအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာ ထပ်ဖတ်လိုက်ရတော့ အရင်က စဉ်းစားဖူးတာနဲ့တောင်မတူတော့ပြန်ဘူး..
shin maeko says:
You should tell the details how did you find and know yourself true love at your age 35…
26 September 2011 at 12:07 am
သည်ပို့(စ်)ကို တချို့တွေက Facebook မှာ လက်ဆင့်ကမ်းကြပါတယ်။ အဲသလို ကမ်းလိုက်တဲ့အထဲမှာ အလွန်အင်မတန် အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဖတ်၇င်းနဲ့ မျက်စိကို လည်နေတာပဲ။ စိတ်မရှည်လို့ ဆက်မဖတ်တော့ဘူး။ နင် မြို့ကို ပြန်လာတော့မှဘဲ ရှင်းပြပေတော့…”တဲ့ဗျား။
ဆရာရေးသလိုပဲ မွှန်တဲ့အချိန်ကျရက် အရသာ တော်တော်ယူလို့ကောင်းတယ် ကိုယ်တွေ့ ဆိုတော့
Share လိုက်ပီ ဆရာရေ ဒီ post လေးကို
30 September 2011 at 2:56 am
ဆရား ကျနော်က ဖေ့ဘွတ်က တစ်ယောက်ပါ..
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်.. ဆရာ ကျနော်ကို အီမေးလ် လိပ်စာပေးပါ့လား
ဆရာ ကို တိုင်ပင် ဖွင့်ပြောစရာ.. စာရေးစရာတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကျနော် မေးလ် က Rashliko@gmail.com
အမြဲအားပေးနေတဲ့..ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ …share ခွင့်ပြုပေးပါ…”အချစ်(အစစ်)” နဲ့ တွေ့ နိုင်ကြပါစေ..အချစ်(အစစ်)နဲ့ ချစ်နိုင်ကြပါစေ…လို့ …
4 May 2012 at 5:34 am
ဒီဘ၀ ချစ်တတ်ပါဦးမလား …
ကျွန်တော့်မှာ အဲလုို သိတ်ချစ်ရသူ တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဘာပဲ လုပ်လုပ် သူ့အတွက် စဉ်းစားလုပ်ခဲ့တာပါ။ ငွေ၊ လုပ်အား၊ အတတ်ပညာ၊ အချိန် တွေအားလုံး ကုို သူ့အတွက် ပုံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၃နှစ်လောက် အကြာမှာ သိလုိုက်ရတာက သူ့မှာ ကျွန်တော့်လုို လူ ၃၊ ၄ ယောက် မက ရှိနေတယ် ဆုိုတာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကုို ချစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကုိုလည်း ခွင့်လွှတ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကုို ခွင့်လွှတ်ရင် သူက နားလည်မဲ့လူ မဟုတ်ဘူး။ ယောင်္ကျားတန်မဲ့ ပုိုင်းလုံးဘဝကုို ဆက်လျှောက်ပြီး သူ့ဘဝ ပျက်မှာပါ။
Next Next post: Dream of Teens 1